Inona aby ny sitrapo sy sitrak'Andmntra - ary inona aby no TSY izy - Dinika forum.serasera.org
Inona aby ny sitrapo sy sitrak'Andmntra - ary inona aby no TSY izy
Fitohizan'ny hafatra : Inona aby ny sitrapo sy sitrak'Andmntra - ary inona aby no TSY izy
rhaj0 - 05/03/2018 17:50
dia miara-mahita fa rehefa misy zava-mitranga, na tsara na ratsy, na mahafinaritra na mahatsiravina, dia misy foana ny milaza, mitory fa hoe "sitrak'Andrmna" na koa "sitrapon'Andmntra" HONO izany.
Na olombe izy @ io na olonkely, dia samy mitompo-teny daholo fa "sitrak'Andrmna" na koa "sitrapon'Andmntra" HONO izany.
Ka aleo ampadalovina eto izany izay seho rehetra, dia azo hiarahana mamaritra hoe: "sitrak'Andrmna" na koa "sitrapo'Andmntra" izzany sa TSIA.
ohatra 1 Ny nodimandry farany teo izao dia Itpkl Tsilavina RAlaindimby.
Ka tena "sitrapon'ny Ray" ve ny nahalasananany, sa TSY sitrapoNY?
Ny zava-misy aloha dia (toa) hoe, AVC no nahavoa azy. Nisy bolongan-drà izany nanentsina ny lalan-drà ao @ ati-doha ao. Ka rahefa tsisy rà tonga any, dia maty ny sela ao. Indraidray raha voavonjy voatsabo haingana, dia mbola velona ihany izay voany, fa kosa, mety mitondra takaitra. Ohatra hoe, raha ilay lafin'ny ati-doha miandraikitra ny fijery no maty ny sela aminy, dia hanana olana @ fijery ilay olona avotra tsy matin'ilay AVC teo.
Fa ny @ Itpkl Tsilavina izany, dia tsy voavonjy (haingana) izy, ary dia iny lasana iny.
gasy1zay - 05/03/2018 18:37
Eze 33:11 Lazao aminy hoe: Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ ny ratsy fanahy amin’ ny lalany, mba ho velona izy.
rhaj0 - 05/03/2018 18:44
akanga aloha... Itplkl Tsilavina ve no ("ratsy fanahy") resahinao eto ry Gasy1zay, sa ... ???
gasy1zay - 05/03/2018 19:44
manontany i rhaj0 hoe inona ny sitrapony sy ny tsy sitrapony dia io aloha zao no voasoratra tonga ato an-tsaiko ( tsy misy idiran'Itplkl Tsilavina ka)
rhaj0 - 05/03/2018 19:46
ok.. Fa ny @ Itpkl Tsilavina:
tena "sitrapon'ny Ray" ve ny nahalasananany, sa TSY sitrapoNY?
Miharena - 05/03/2018 19:55
Tiy izao no sitrapon'Andriamanitra izay ohatra anankiray taloha:
Dia taty aoriana dia nisy koa olona maty dia novelominy
gasy1zay - 05/03/2018 20:15
avereno indray ilay lojika e, tsy sitrany ny hahafatesan'ny ratsy fanahy ( mpanota tsy nibebaka no resahina eto), ka dia ataovy hoe mpanota tsy nibebaka ve ilay ranamana lasa sa tsia , raha eny dia tsy sitrany zany, raha efa kristiana niova fo izy dia "mety" sitrany zany ( mbola misy si /oui non si hafa manko)
rhaj0 - 05/03/2018 20:24
Ka resaka gilobaloba ny anareo ry Miharena sy Gasy1zay, fa raha ny @ ity tranga ity, dia ny fanontaniako dia hoe, ilay "tena" nahafaty an'Itpkl Tsilavina t@ iny herinandro iny ve:
tena "sitrapon'ny Ray" sa TSY sitrapoNY?
Satria rahefa haintsika io izao ny fandehan'ny AVC, dia:
- raha voatily fa tena tsimetimety anie Ratpkl, satria ny AVC dia mivoatra moramora ao, raha fantatra ny tension sy taux de cholesterol sy ny lanjany ets...
- raha nitaiza vatana nanao fanatanjahan-tena sy tsy namely be sigara/toaka izy, ahoana ny fisakafony tao..
- raha haingana ny famonjena azy nony nitranga ny AVC (ambulance ets...)
- na raha @ ankapobeny, raha mba normal (toa ny aty) ny systeme santé ao Dago ao
dia mety mbola avotra ary mbola velona Iratpkl izao isika miteny izao.
ka raha fantatra ny fandehan'ny 1 andro farany sy ny talohan'izay an-dRatpkl tao, dia ahoana ho'a :
rhaj0 - 05/03/2018 20:40
oops.. nifandika ny resaka.. fa ok.
gasy1zay ka dia ataovy hoe mpanota tsy nibebaka ve ilay ranamana lasa sa tsia , raha eny dia tsy sitrany zany
ka raha ny fahazoako azy izany, ia @ Gasy1zay, dia :
Tena "sitrapon'ny Ray", eny, sitrapon'ny Ray ny nahalasananan'Itpkl Tsilavina
Izay ve ilay izy ry Gasy1zay? sa diso fandray aho? Mba confirmer-o kely eee... fangatahana ny ahy.
gasy1zay - 05/03/2018 21:02
raha azoko tsara zany dia tena azon'i rhaj0 antoka fa tena kristiana niova fo izy?
rhaj0 - 05/03/2018 21:15
tsy azoko. Hoe Itpkl Tsilavina dia "kristiana niova fo" hozy i Gasy1zay ??
Ny eraky ny gazety k'lou dia nisafidy Iratpklh ny handoroana ny nofony. Tsy haiko hoe, safidin'ny Kristiana, na niova fo na tsy niova fo, ny tahak'izany.
Fa io ho'a ry Gasy1zay. izao ve hoz'ianao :
gasy1zay - 05/03/2018 21:23
Ka tsy afaka ny hilaza ny valiny aho satria tsy fantatro ny fiainan'Itpkl, za ve mahafantatra ny fifandraisany tamin'Andriamanitra hoy rhaj0? Ny hany afaka ho lazaina hoa dia le nosoratako hoe raha toa ka olona fantatra hoe tsy mbola nandray famonjena no maty dia tsy sitrak'Andriamanitra izay, satria fantany fa ho very iny olona iny.
gasy1zay - 05/03/2018 21:25
oh ry rhaj0 a! Billy Graham zao maty vao haingana, izy zao afaka manambara aminao 100% aho fa sitrapon'Andriamanitra ny fahafatesany.
rhaj0 - 05/03/2018 21:33
Eny azany fa ndao Itpkl Billy no resahina.
Raha nigogola kely ianao ry Gasy1zay, dia nahita fa :
The Associated Press reports that Graham had been treated for cancer, pneumonia and other ailments in recent years.
Ka Tena "sitrapon'ny Ray", eny, sitrapon'ny Ray ny nahalasananan'Itpkl Billy, hozy i Gasy1zay.
Fa mijaly dia mijaly ihany izany tsaboina "cancer, pneumonia and other ailments" izany an... Ka tsy haiko hoe, tena "sitrapon'ny Ray" ve izany, ary izy efa ho 99 taona io vao "nalainy"??
Fa entre-pa fa toa nihazakazaka nankany @ dokotera ihany izany Iratpkl. Nefa anie tena rezatra be izy io raha samy mpitondra fivavahana ihany ee... Tokony raha nametra-tanana teo an-dohany izao izy dia tokony efa sitrana, raha ny finoan'i Gasy1zay azy izay kouh...
rhaj0 - 05/03/2018 21:40
gasy1zay raha toa ka olona fantatra hoe tsy mbola nandray famonjena no maty dia tsy sitrak'Andriamanitra izay, satria fantany fa ho very iny olona iny.
Dia tena immortel izany ny "olona tsy mbola nandray famonjena", satria TSY mankasitraka ny ahafatesany HONO Andmntra, hozy Gasy1zay. Indrindra fa i omnipotent-omniscient no manao ny sitrapoNY.
Sa i Satana indray no naka ilay olona tsy mbola nandray famonjena ry GAsy1zay, raha araka ny teorianao ao io??
mahavariana anefa, fa objectivema, dia "akaman'i Satana" izany olona tsy mbola nandray famonjena izany, koa maninona no alain'i Satana dia ampijaliany endasina izany.
gasy1zay - 05/03/2018 21:43
ka mba mety nanafika faraparany ry satana sao mba hihemotra amin'ny finoany izy rehefa sendra ny mafy, tadidio i Joba e! Fa Jesoa mety efa nahafantatra fa tsy ny aretina sy ny fahoriana mintsy no hampiova ny finoany ka.
rhaj0 - 05/03/2018 22:13
gasy1zay ka mba mety nanafika faraparany ry satana sao mba hihemotra amin'ny finoany izy rehefa sendra ny mafy
Ny tian'i Gasy1ay lazaina ve, dia hoe,
1- "notafihan'i SAtana" Iratpkl Billy, ka nasiany ny "cancer, pneumonia and other ailments",
2- fa h@ naha-99 taona azy, dia tena "nametra-tanana t@ tenany" tao Iratpkl, ary dia tsy nety naty,
3- afa-tsy izy io tonga 99 taona io, izay vao nalain'Atra, araka ny sitrapon'Atra?
danz be ilay scenario tefitefen'i Gasy1zay an-kandriny eto izany an
gasy1zay - 05/03/2018 22:29
Mba milaza ny hevitro aho fa tsy zay ve ny forum e!
rhaj0 - 05/03/2018 22:41
Ka tsihaitsihay anie, fa i Gasy1zay, raha tsy diso aho, toa nitono-tena hoe, "miresaka @ jesoa" (rahefa mivavaka ao), ka dia tena mamaky sy mandalina izay rehetra soratanao eto anie aho ee..
TSSY mba hitanao tena mba manaja sy mihaino ary mamaly izay rehtra soratanao eto ve aho ry GAsy1zay?
gasy1zay - 05/03/2018 23:36
Rehefa tafaresaka i Jesoa sy Petera dia nambaran'i Jesoa ny fomba hahafaty an' i Petera ho maritiora, dia i Petera nanontany an'i Jesoa hoe ary ahoana ny momba an'I Jaona dia hoy Jesoa namaly azy hoe : Raha tiako hitoetra izy mandra-pihaviko, ahoanao izany? fa manaraha Ahy hianao.
azon'i rhaj0 ve? Azy sy Jesoa izany fa tsy anjarako no manontany hoe ahoana ny momba an'I Billy Graham Jesoa a!